Ghana ၏တရားဝင်အဆိုအရကိုတိုကိုသည် CAF ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့သောကြောင့် 'အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းမှု'
'' အလွန်အမင်းညစ်ညမ်း '' Kotoko ဂါနာလူမျိုးအရာရှိတဦးအဆိုအရက CAF ချန်ပီယံလိဂ်တိုက်ပွဲဖြစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
'' အဲဒီကစားသမားအိပ်မရကြဘူး။ ငါသည်သင်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုပြောပြ, သူတို့ကအိပ်မရကြဘူး။ သူတို့အိပ်ရာ၌ရှိကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့အိပ်မဆိုလိုပါ။ '' သူတို့ကဖုန်းခေါ်အောင်ဝဘ် browsing နှင့် porno စောင့်ကြည့်သူတို့၏ညဖြုန်း!
'' သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ထိုသူတို့ကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်သင်အတည်ပြုချက်ကိုရနိုင်မယ့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူရ။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားလေးများအတွက်လုံလောက်သောအိပ်စက်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး! '
ဂါနာလူမျိုးဘက် Kokoto အယ်လ်ဂျီးရီးယားခြမ်း MC အယ်လ် Eulma အားဖြင့်က CAF ချန်ပီယံလိဂ်မှထွက် crashing စေလွှတ်ခဲ့သည်နှင့်ဂါနာလူမျိုးဘောလုံးအရာရှိတဦးကဖီ Manu သူတို့ကတှေ့ဆုံဆုံးရှုံးအတိအကျအဘယ်ကြောင့်သူသိတယ်ယုံကြည်သည်။
ရသည်မှာ Kokoto သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်လျှော့မတွက်ခဲ့ပါဘူးနှင့်ဒဏ်ရာဟာအစား, သူတို့ရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုအတွက်အပြစ်တင်ဖို့မ Metro အခြားအချက်တစ်ချက်ကသူတို့ကိုယှဉ်ပြိုင်ထဲကနြတေဲ့အတှကျအပြစ်တင်ဖို့ခဲ့တာကတင်ပြထားပါတယ်။
တရားမျှတသော Kotoko သာကျဉ်းမြောင်းစွာသူတို့ရဲ့ဒုတိယခြေထောက်တှေ့ဆုံအတွက် 2-1 ဆုံးရှုံးခဲ့ရခံရဖို့ဒါ porn တစ်ခုအလွန်အကျွံစွဲအပြစ်တင်ထိပ်ကျော်တစ်ဦး tad ဖြစ်စေခြင်းငှါ, တဦးတည်းပါဝင်ပတ်သက်သူအပေါငျးတို့မျှော်လင့်ပါတယ်မယ်လို့ပဲအမှု၌မိမိတို့ browsing history ဖျက်ပစ်ကြပါပြီမစ္စတာအချို့တရားဝင်မှုရှိ Manu ရဲ့တောင်းဆိုမှုများ။